China Electric mop orinasa sy mpanamboatra | Meiling
Fotoana miasa > 60min (Fametahana maina); > 40m (Wet Mopping)
Fahafahana bateria Bateria Lithium 3200mAh
Fotoana hiampangana 2.5 Ora
Lanja afa-karatsaka 2.7KG
Fahaiza-mitazana rano 300ml
Haben'ny vokatra 124 * 34 * 20cm
Haavo tabataba 30-50 dBA
Paso elektrika tsy misy tariby tsy misy tariby, poloney, savoka, kobanina ho an'ny lena sy maina ary fanadiovana
Nahazo poleta savoka matihanina / atsofohy ny gorodonao hazo vaovao vaovao isaky ny tianao.
2. Mora ny manadio karazana tokontany sy ny fepetra isan-karazany
Mifampiraharaha amin'ny karazana gorodona marobe toy ny gorodona hazo, seramika, marbra, velarana biriky, laminaty, sns.
fanosotra lena / maina / manafosafo, fitaovana iray misy lahasa fanadiovana 4: vovoka, tasy menaka, tain-dronono, fako maloto.
3. Famafazana press iray iray
Maina haingana tsy misy tasy amin'ny rano, maina ny gorodonao haingana ary tsy mamela tasy rano. Misaotra an'ireo pads mihodina haingana. Fandidiana tanana iray, tsy misy miondrika, fotoana ary fitsitsiana angovo.
4. tabataba ambany
Ny tabataba ambany dia mahatratra 30-50 dB fotsiny, saika tsy misy feo fandidiana ary tsy manelingelina ny fianakavianao hiala sasatra tsara.
5. Fampandrenesana azo entina ary maharitra
Afaka maharitra 60 minitra ny herinaratra. Afaka manadio sy manadio amin'ny toerana samihafa izy, mifanaraka amin'ny filan'ny 200m2 ao anaty fanadiovana. Bateria lithium 3200mmAh Lithium mahomby amin'ny fahombiazana, manadio 200 sqm amin'ny 60 min amin'ny fiampangana iray izy io. Kitapo bateria azo esorina, mora soloina sy andoavana vola.
6. Pads mihodina roa miaraka amina motera matanjaka
Ampio ny fitaovana hampihetsiketsika ny potipoti-javatra lalina, ny tena vatana mavesatra misy pads mihodina haingana Ny lanjan'ny net dia 2.7KG izay manome antoka fa afaka manadio ampy
7. Fanazavana LED
Manampy anao hahita ireo faritra maizina azo aleha: sofa, latabatra, latabatra, fandriana
8. Toerana madio araka izay irinao
Mop zorony sy faritra ambaniny amin'ny fomba milamina, 180 marindrano°, mitsangana 90°.
Previous: Firavaka Ultrasonic Cleaner
Manaraka: Mpanadio gorodona tsy misy tariby
Kitapo elektrika tsy misy tariby